Guddoonka Gunnimada! – Bashiir M. Xersi
Maxamed Axmed Caalin, isagana xilka markii laga qaaday ayuu is xajiyey, walibana Maxkamadda saree ee maamulku xukuntay in sharci loo raacay xil ka qaadistiisa, inta ka maagay inuu u hoggaansamo go’aanka Maxkamadda sare iyo mudanayaasha xilka ka qaaday, ayuu Odayaal isaga wacday Xamar iyo meelo kale, xaal mastuurna lagu gaaray; inuu xilka sii hayo, waaba yaabe, markii hore maxaa xeer iyo xugun loo samaynayey? Haddiiba aan la dhaqangalinayn.
Doorasho ayaa madlan bisha August ee nagu soo food leh, Caalin ilaa hadda wax hadal ah oo ku saabsan lagama hayo, ku xigeenkiisa C/samad Nuur Guuleed ayaa magacaabay guddi doorasho, waxaana sii adkeeyey Axmed Maxamuud Xasan “Axmed Baasto” haddaba arki doonnee sida uu yeelo Caalin, inuu ka madax adaygo oo sida waalkiis sanad bug [Falso] ah beertoo, ama in uu xeerka dhigan u hoggaansamo.
Aqriste, middan si fiican iila dhuux, hadba sida u dareento waxay ku xiran yahay fahamka waxa socda, bal wadanka gees ka gees eeg, maanta gobol aan Xabashi joogin ma lahan, Somaliland iyo Puntland iyagu Qaloonka si joogto ayey u dubaan, koofurta deegaannada qaar ayaa Fiddaw iyo Xersi xir ahaan u gayn jiray, hadda waxay maraysaa inaysanba sugan, ee ay ugu timaad meesha uu yaal, halkaana ka solato, kana yeesho sida ay doonto.
Previous Previous post: Foolal cusub iyo Faro caddaana
Next Next post: Qiblada Qabbaaniyaasha!